Garoonka stadio Muqdisho muxuu waayo kala duwan soo maray! – Hornafrik Media Network
Garoonka stadio Muqdisho muxuu waayo kala duwan soo maray!
By HornAfrik	 On Aug 28, 2018
HornAfrik-Tuulada Cayaaraha Soomaaliya ee Muqdsho Stadium , waxaa uu ahaa halka laga daawado bilicda iyo magaca Soomaaliya. Waxaa uu ahaa Tuulo lagu qabto qeybaha Cayaaraha ee kubadadda Cagta , koleyga dabaasha orodka iyo kuwo kale lehna heer deegaan , heer Qaran iyo heer Qaarad.
Stadio Muqdisho Waxaa la dhisay sanadkii 1978- sanado badan ayuu ahaa Garoonka ugu wanagsan Afrika , 35,000 oo qof ayuuna qaadaa.
Waxaa uu marti geliyay farxado badan , cayaaro kooxha dalka ka dhisnaa iyo kuwo caalami ah intabad aad ayaan loogu dhex sacbiyay in badan … balse sanadihi u dnabeeyay waxaa isku badalay xoogaga Muqdisho ku loolamay , waxaana uu marti geliyay Ciidamo Amreican ah , kuwo Bakistaan ah , Itoobiyan ,Maleeshiyaad dalka soo maray ururo diimeed iyo Amisom oo ugu dnabeysay sacabkii ayaana sanadihgi danmbe loogu badalay xabado lagu dhex rido iyo weeraro lagu qaado hadba cida xooga ku heysata.
Doogii lagu yaqiin Garoonka lama daaqsan balse ciidamadaii gudaha isukugu badalay ayaa meesha ka saaray , muuqaal ahaan in badan oo kamid ah wali waa uu wanagsnasanyaahy marka la fiiroylo xaaldihi adkaa ee uu soo maray , waxaasa uu u bahanayahay dayactir , Ciyaartooydi qaar waqtigii hore ku cayaari jiray waa ay dhinteen kuwona waa ay nolyihiin waxa akamid ah Ibraahim shaash , iskoot Saciid Ducaale Muqtaar coti Nuurgaab iyio kuwo kale.
Waxaa lagu xasuustaa cayaaro heer caalami ah oo lagu qabtay iyo madax u soo daawasho tagtay sidoo kale madaxdii dalka soo martay ayaa ku qudbeeyn jiray.
Mjudoo laga joogo tdoba sano , dabayaaqadai 2011 ayaa Ay ciidamada Amisom gudaha u galeen Stadio Muqdihso oo xiligasi laga saray Al-shabaab magaalada inteeda badan , Saraak Amisom oo xiligaasi wariyaal aan kamid ah Garoonka kula hadlay ayaa sheegay in Garoonka uu muhim u yhay.
Mudadii uu garoonka ka caagana aku cayaarista waxa lagu cayaararay Banadir Stadium iyo midka Jamacadaaha oo kol dhaw la hirgaliyay.
Mudadasi badan kadib maanta garoobka faca weyn ee Muqdisho stadium Amisom wa ay ka faaruqeen waxaana muuqanaya ifafaalo ay dhalinyaradu fursad ugu heli doonaan in ay ku cayaaraan , wasiirka Dhalinyarada iyo cayarada Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in aan laga daahi doonin dayacstir lagu sameeyo.
Waxaa uu garoonka u baahanayahy dayactir si markale uu uga soo muuqdo saaxada garoomada faca weyn ee lagu ciyaaro , waxaa loo bahanayaahy in dib loo qurxiyo garoonka , roogag la dhigo lagana shaeysiiyo leyrarki waa weynaa ee ku xirnaa si loogu qabto tartamada kala duwan oo hataan ah kuwo aan loo helin garomo waa weyn . balse waxaa laga ma maarmaan ah in shacab iyo dowladi iska kaashadaan sidii dib loogu cayaaro!
Saadaq Joon Oo Diiday inuu baneeyo Godka Jilacoow, iyo Muran ka taagan Arrintaasi.
Dagaal maanta ka dhacay Dhuusamareeb!